၂၀၁၉ နွေရာသီတွင် Blackmagic ဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသောအကြီးဆုံးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည် NAB သတင်းများ | 2019 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » နွေရာသီ 2019 ရဲ့အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တပတ်ရစ် Blackmagic ဒီဇိုင်းဦးလွတ်မြောက်
Fremont, CA - သြဂုတ်လ 16th, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း အဆိုပါ 2019 နွေရာသီရာသီရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုပ်ရှင်ထုတ်၏နံပါတ်မြောက်မြားစွာကိုအသုံးပြုကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း ယင်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာအပါအဝင်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post စဉ်အတွင်းထုတ်ကုန်, DaVinci စတူဒီယိုတည်းဖြတ်ရေး, အရောင်ဆုံးမခြင်း, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု (VFX) နှင့်အသံ post ကိုထုတ်လုပ်မှုလျှောက်လွှာများနှင့်ထို့ထက် ပို. ဖြေရှင်း။ Black ကခုနှစ်မှာ "လူအ - ဒါဟာအကြီးမားဆုံး Blockbuster နှင့်ထိုကဲ့သို့သော" အခန်း3Parabellum, ယောဟန်သည်မတရားသောသူ ": အဖြစ်နွေရာသီ၏မျှော်မှန်းထားသည် Blockbuster, အချို့ပါဝင်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ" နှင့် "Rocketman"
Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာတဝှမ်း created အမျိုးမျိုးသောနွေရာသီရုပ်ရှင်အပေါ်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှု၏နီးပါးတိုင်းအဆင့်မှာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ DaVinci စတူဒီယိုကတော့ဘရိုင်ယန်ဘဏ်များ "ပေါ်တွင် colorists, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အယ်ဒီတာများအများအပြားများအတွက်လျှောက်လွှာကိုသွားနှင့်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီ3ရဲ့ Stefan Sonnenfeld အဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ, post" ဒိုရာနှင့်ရွှေများပျောက်ဆုံးသွားသောစီးတီး, "ဒေသတွင်းကသူရဲကောင်းရေးသားချက်များရဲ့ Toby Martisius ဖြစ်ဆက်လက်ဖြေရှင်း "နှင့်အပေါ် Goldcrest ရဲ့အာဒံကို Glasman" စာရေးသူ JRR Tolkien ။ "
ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ကင်မရာများမော်နီတာ, ကုမ္ပဏီရဲ့အမျိုးမျိုးသော router များ, ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ထုတ်ကုန်များအနေဖြင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်မြင်ကွင်းများအမျိုးမျိုးအပေါ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်, DaVinci ဖြေရှင်းနှင့် Mini Converter ထိုကဲ့သို့သောအနုပညာ "အဖြစ်ဇာတ်ဆောင်ဟာသ, ကနေအစုထုတ်လုပ်မှုအပေါ်စီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့ DIT လှည်းပေါ်မှာအသုံးပြုခဲ့ကြသည် ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေး, အမှောင်ဖီးနစ် "ကဲ့သို့သော Blockbuster အရေးယူရုပ်ရှင်များ, မှ" ။ "
DaVinci သုံးပြီး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုသို့မဟုတ် Fusion စတူဒီယိုဖြေရှင်းဘို့:
ကုမ္ပဏီ 21 ၏တွမ်ရေကူးကန်များကရောင်စုံ "3 Bridges";
ကုမ္ပဏီ3၏ Greg Fisher ကအားဖြင့်ရောင်စုံ "ကြော်ငြာ Astra";
"Booksmart" Technicolor မှာစုပေါင်းအရောင်များ၏အဲလက်စ် Bickel အားဖြင့်ရောင်စုံ;
မုန့်ဖုတ်စတူဒီယို၏ "သူဌေးကအဆင့်" VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးဂျော့ခ်ျ Loucas အဆိုပါ VFX လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ထားသော post ကိုအလုပျအတှကျစတူဒီယိုဖြေရှင်း DaVinci အသုံးပြုသော;
ဒေသခံသူရဲကောင်း Post ကိုများအတွက် Toby Martisius အားဖြင့်ရောင်စုံ "ဘရိုင်ယန်ဘဏ်များ";
ကုမ္ပဏီ3၏ Stefan Sonnenfeld အားဖြင့်ရောင်စုံ "ဒိုရာနှင့်ရွှေများပျောက်ဆုံးသွားသောစီးတီး";
Kyotocolor ၏ Bradley Greer အားဖြင့်ရောင်စုံ "အားရိုမြေပြင်";
Technicolor မှာရောင်စုံ "ဒီ Hunt က";
"ယောဟနျမတရားသောသူ: အခန်း3- Parabellum" ကုမ္ပဏီ3၏ကို Jill Bogdanowicz အားဖြင့်ရောင်စုံ;
"Luce" စုပေါင်းအရောင်များ၏အဲလက်စ် Bickel အားဖြင့်ရောင်စုံများနှင့်ယန္တရားဒစ်ဂျစ်တယ်၏ VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူး Lucien Harriot အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအတွက် Fusion စတူဒီယိုကိုအသုံးပြု;
"အနက်ရောင်ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားများအတွက်: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ" ကုမ္ပဏီ3၏စတီဖင် Nakamura အားဖြင့်ရောင်စုံ;
Goldcrest ၏ရော့ Pizzey အားဖြင့်ရောင်စုံ "Rocketman";
EFILM ၏ဂျေဆန် Hanel အားဖြင့်ရောင်စုံ "ချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ2၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဝက";
Goldcrest ၏အာဒံကို Glasman အားဖြင့်ရောင်စုံ "စာရေးသူ JRR Tolkien" ။
အသုံးပြုခဲ့တဲ့နွေရာသီရုပ်ရှင် Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည်:
"ဒီကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးအနုပညာ" DIT ယာရက် Jardu အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြု Blackmagic ဒီဇိုင်း routers နှင့် converters အဖြစ် set ကိုအလုပ်အပေါ်အဘို့အ DaVinci ဖြေရှင်းရန်;
DIT Nina Chadha DaVinci ဖြေရှင်းရာတွင်အသုံးပြု "သူဌေးကအဆင့်" DaVinci အစုံအပေါ်နေ့စဉ် LUTs ကိုဖန်တီးရန် Mini ကို Panel ကိုနှင့် Mini Converter ဖြေရှင်း;
"အမှောင်ဖီးနစ်" DIT ဂျူလီ Garceau DaVinci ဖြေရှင်းသုံး SmartScope Duo မော်နီတာ, Smart Videohub 12 × 12 Router က, DeckLink Mini ကို Recorder ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ကဒ်နှင့်အမျိုးမျိုးသော UltraStudio ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ထုတ်ကုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အမျိုးမျိုးသော routers နှင့် converters အဖြစ်;
"FastandFurious Presents: HobbsandShaw" DIT ရှိမုနျကို Jori UltraStudio Mini ကို Recorder နှင့် DaVinci set ကိုအလုပ်အပေါ်အဘို့ဖြေရှင်းရာတွင်အသုံးပြု set 2nd;
"အားရိုမြေပြင်" DP မိုက်ကယ်ဝီလျံကျောင်းအုပ်ကြီးဓာတ်ပုံများအတွက် URSA Mini ကို 4K ကင်မရာများအသုံးပြုသော;
"ယောဟနျမတရားသောသူ: အခန်း3- Parabellum" DIT ပက်ထရစ် Cecilian DaVinci ဖြေရှင်းအသုံးပြု UltraStudio set ကိုအလုပ်အပေါ်အဘို့ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ထုတ်ကုန်;
"နှောင်းပိုင်းည" DIT မိုက်ကယ် Maiatico DaVinci အစုံအပေါ်ဖြေရှင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသော routers နှင့် converters အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်;
DIT ဂျူလီ Garceau DaVinci ဖြေရှင်းရာတွင်အသုံးပြု "Long က Shot" SmartScope Duo, Smart Videohub 12 × 12, DeckLink Mini ကို Recorder နှင့်အမျိုးမျိုးသော UltraStudio ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ထုတ်ကုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်အမျိုးမျိုးသော routers နှင့် converters အဖြစ်;
"မာရင်းကျို" DIT ရှင်ပေါလု Rahfield အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုသော Blackmagic ဒီဇိုင်း set ကိုအလုပ်အပေါ်အဘို့ router များ, converters အဖြစ်နှင့် DaVinci ဖြေရှင်းရန်;
"Spider-Man ™: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ. " အသုံး DeckLink ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ကတ်များ RAW ရိုက်ကူး၏အစစ်အမှန်အချိန် streaming များအဘို့, DaVinci အနီး set ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖြေရှင်းနှင့်စမတ် Videohub 20 အစုံအပေါ် 20 နှင့် Mini Converter ×။
URSA Mini ကို 4K, Smart Videohub, DeckLink, Mini ကို converter, UltraStudio, SmartScope Duo, Fusion စတူဒီယို, DaVinci ၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံစတူဒီယိုဖြေရှင်း, DaVinci Mini ကို Panel ကိုလူအပေါင်းတို့သည်အခြားဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ blackmagic Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-16
ယခင်: 3D အဘို့အဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ motion ဒီဇိုင်နာ - ကန်ထရိုက်အရစ်ကျ
နောက်တစ်ခု: Cartoni ကို 'တစ်ဦး SDS tripod အနိုင်ရမည်ဟု' 'ပြိုင်ပွဲမှဆုရရှိသူကိုကြေညာ